सुत्दा सिरानीको नजिक भुलेर पनि नराख्नुहोस् यस्ता चिज, जीवनमा पर्नेछ नकारात्मक असर ! – Sandesh Press
सुत्दा सिरानीको नजिक भुलेर पनि नराख्नुहोस् यस्ता चिज, जीवनमा पर्नेछ नकारात्मक असर !
August 1, 2021 203
वास्तुशास्त्रको मानिसको जीवनमा विशेष महत्व रहेको छ। वास्तुले मानिसको जीवनमा विभिन्न तरिकाले प्रभावित गर्छ। वास्तुका अनुसार घरको दिशा लगायत यसमा राखेर हरेक चीजका केहि न केहि अर्थ हुन्छ। यस्तो स्थितिमा तपाईंले सुतेको समयमा आफ्नो सिरानी नजिक वा सिर नजिकै केहि चीज राख्नु वास्तु दोषको कारण बन्न सक्छ। यी चीजहरूलाई आफ्नो सिरको नजिक राख्दा जीवनमा नकरात्मकता र अशुभता आउने सम्भावना रहन्छ। त्यसोभए, तपाईले सुत्दा के-कस्ता चीज आफ्नो सिरानीको नजीक राख्नु हुँदैन त ? जान्नुहोस्….
वास्तुशास्त्रका अनुसार समाचारपत्र, किताब, पत्रिकाजस्ता चीजहरू तपाईंले आफ्नो सिरानी नजिकै राख्नु हुँदैन। यसो गर्नाले मानिसको जीवनमा नकारात्मकता त आउँछ नै जीवमना विभिन्न प्रकारका मानसिक तनाब पनि बढ्न सक्छ।
वास्तुका अनुसार सिरानीको नजिक वा ओछ्यान को अगाडि ऐना राख्नु हुँदैन। यसले वैवाहिक जीवनमा समस्या ल्याउन सक्छ।
वास्तु अनुसार सुत्दा सिरको नजिकै ओखल पनि राख्नु हुँदैन। यसले सम्बन्धमा मनमुटाव पैदा गर्न सक्छ। यस बाहेक, जीवनमा सुख-शान्तिको कमी आउन सक्छ।
वास्तुका अनुसार सुत्दाको समय तेलको बोतल कहिल्यै टाउको नजिक राख्नु हुँदैन। यसले जीवनमा धेरै समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
प्राय मानिसहरु सुत्नु भन्दा पहिले आफ्नो ओछ्यान नजिकै जुत्ता र चप्पल खोलेर सुत्ने गर्छन्। तर वास्तु शास्त्रका अनुसार कहिल्यै पनि सिरानी वा ओछ्यानको नजिकै जुत्ता वा चप्पल राख्नु हुँदैन। यसले जीवनमा नकरात्मक उर्जा ल्याउँछ।
तपाईंले सुत्ने समयमा सिरानी नजीकै कहिल्यै पर्स राखेर सुटु हुँदैन। यसो गर्नाले तपाईंको जीवनमा आर्थिक समस्या आउनसक्छ।
वास्तु शास्त्रका अनुसार मोबाइल, वाच, फोन, ल्यापटप जस्ता इलेक्ट्रोनिक चीजहरू सिर नजिक राख्दा जीवनमा नकारात्मकता आउँछ। यी चीजहरूलाई टाउको नजीकै राख्दै, त्यस्ता सामानहरुबाट निस्कने किरणहरूले व्यक्तिलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा असर गर्छ।
वास्तुका अनुसार टाउको नजीकै डोरी राखेर निदाउँदा जीवनमा नकारात्मक उर्जा आउँछ। यसले काम गर्दा कार्यक्षेत्रमा विभिन्न समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ।
केही मानिसहरू पानीको बोतल वा पानीले भरिएको भाँडा टाउकोको नजिक राखेर सुत्ने गर्छन्। तर कहिल्यै पनि सिरको नजिकै पानी भएको भाँडो राख्नु हुँदैन। यसले चन्द्रमा प्रभावित हुन्छ र व्यक्तिमा मानसिक रूपले असर पर्न सक्छ।
Prevगाउँघरमा पाइने यो फूल हुन्छ यतिधेरै रोगको औषधि, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
Nextअकस्मात धन लाभ हुनु अघि देखिन्छन् यस्ता सङ्केत, कतै तपाईले पनि देख्नुभएको छ की ?
काठमाडौंं आउँदै गरेको सवारी दुर्घटना : एकको मृत्यु, चार जना गम्भीर घाइते